Yintoni ongayifaka kwi-Car Emergency Kit yakho
Iimoto neekhekhi Ukugcinwa & Ukulungiswa
by UBenjamin Jerew
Ngaloo mihla, abaqhubi abaninzi bahamba ngeendlela zokuhamba ngeendlela zokukhuseleka, ngokuqinisekileyo ukuba iifowuni zabo, ukuqinisekiswa kwemoto, izithuthi eziphantsi, kunye nobungqina bebhola bezithuthi zingabakhupha ngaphandle kwazo naziphi na izimo. Nangona kunjalo okwenyaniso kwiimeko ezininzi, iimeko eziphuthumayo zangempela ngenxa yeemeko zezulu ezibi kakhulu, izingozi zeemoto, okanye ukungasebenzi kwemoto kunokuvela ngokungalindelekanga kwaye kulungile ukulungiselela.
Eyokuqala, kwaye into ecacileyo into ekunyamekele ngayo imoto yakho. Oku kubandakanya ukugcinwa okucwangcisiweyo rhoqo, ukujonga amathayi akho - ungayikhohlwa i-brakes-bakes, ibhetri, kunye ne-fluids ubuncinane kanye ngenyanga, kunye nokulungiswa ngokukhawuleza kweengxaki. Ukuba isithuthi sakho sigcinwe kakuhle, akunakwenzeka ukuba siphule ngokukhawuleza. Ikiti yokuqala yokuncedisa kunye nejaji yefowuni ephathekayo iyasebenza nakweyiphi na imoto.
Uninzi lweemoto kufuneka zibe nezixhobo ezaneleyo zokutshintsha ivili elincinci, kwaye zinokuquka i-kit yoncedo lokuqala , kodwa ezi zinto ziseko ziya kukufumana nje ngoku. Endaweni yoko, jonga ukwakha inqwelo yengozi yongxamiseko ejongene nayiphi na imeko ongayifumana nayo. Nantsi, siyiphule phantsi kwiinqanaba ezintandathu.
Ukhuseleko Lwezithuthi Nokulungiselela
Izilwanyana ezilumkiso Zinceda Abanye Bakubone. https://www.gettyimages.com/license/EA06074
Uluhlu olulandelayo luza kukugcina lukhusele kwaye lukulungiselele phantse nayiphi na imeko engxamisekileyo yokulungisa iplati ukuya emlilweni.
Iimpawu zendlela , izilwanyana ezilumkiso , okanye iibhononi ezikhanyayo zibalulekile okanye zilumkise okanye zixwayise abanye abaqhubi, ngakumbi ukuba kufuneka uyeke ecaleni kwendlela ebusuku.
Iimbane ze-Jumper xa ibhetri efile
I-Tire Iplagi kunye ne-Fix-Flat- Ngaba ingaba isilungiselelo ngokukhawuleza ukuze uhambele kwakhona , ubuncinci kwisitoreji sokulungisa isondo.
I- multitool okanye iSwitzerland Army Knife ixhaphake kwiimeko ezininzi
Ukuqhuba iteksi isebenza kwizinto ezininzi, kunokuya kuzo zonke iindawo zolu luhlu.
Imfosholo eqhotyoshelweyo ikhethekileyo ngokususwa kwekhephu.
Umtsalane weetragi , ityuwa , okanye i- kitty litter zinkulu ukuba unamathele kwindawo epholileyo okanye enodaka.
I-jug yegesi engenalutho - Iingqungquthela ezimbalwa zinganeliseki ukuba zifike kwisikhululo segesi.
Amanzi amaninzi - Ngokukodwa i-washer umthamo weHlabathi, kunye ne-coolant kunye neoli, xa uyazi ukuba uvuza okanye uvuthela i-radiator hose .
Sebenzisa iiglovu - Ukukhusela izandla.
Intambo ye-Tow - mhlawumbi yonke into ofuna ukuyifumana yinto encinci.
Ucoceko lohambo olude
Ucoceko awunakwenzeka, kodwa i-Kit Toiletries Kit inceda. https://www.gettyimages.com/detail/photo/wash-kit-including-towel-and-toothpaste-and-high-res-stock-photography/74423662
Ayikho yonke imeko engxamisekileyo yinkalo okanye ubomi okanye ukufa okanye kuquka ukutshabalalisa imoto. Ngamanye amaxesha indlu yokuhlambela iphuma kwiphepha langasese, okanye mhlawumbi loo anyanisi e-burger yakho iphinda iphindaphinda. Kuzo zihlandlo uya kuba nombulelo kakhulu ukubeka imoto yakho kunye:
Amabhulebhu ezinamazinyo kunye ne- toothpaste ekuhambeni kohambo
Iphepha le-Toilet , iifutha ezimanzi , i- sanitizer , izandla kunye neetamponi
Ifowuni yokunyusa xa kuthengwa kwendlela yokuhlamba kuphela yimihlathi.
Izikhwama zokudoba kunye neengxowa zokukhupha ukugcina izinto ezicocekileyo zomileyo kunye nokulahla udoti kunye nenkunkuma.
Umxube weMzila kunye nezinye izinto zokugada zigcine amandla akho. https://www.gettyimages.com/detail/photo/trail-mix-royalty-free-image/637636584
Ukuxhamla kumnandi, kodwa ulambile kwaye unxaniwe ngakumbi, ngakumbi xa uhamba nabantwana abancinane okanye abantu abadala.
Iibhanki zamandla, uMxube weMzila, kunye nezinye izinto zokungatyeki ezingenakonakala I-salad ye-tuna ngaphambili, i-peanuts, i-almonds, i-candies ekhuni, inyama yenkomo. Iziqhamo ezomileyo kunye nabaqhiqhi bafumana amandla anamandla.
Amanzi okanye iziphuzo zezemidlalo
Ukusinda, Ukufudumala kunye noThuthuzelo
I-Car Good Emergency Kit ingayilondoloza ubomi bakho. https://www.gettyimages.com/license/688076639
Ukuba uhamba-uhamba okanye uhamba kwindawo ekude, oku kulandelayo kuya kwenzeka.
I-Kit yoNcedo lokuqala - Ukukhusela intsholongwane okanye ukugqoka amanxeba.
Isikhumba sendawo ukuze sihlale sishushu kwiHlabathi kunye ne- poncho yokuhlala isomile.
Ishaja yefowuni ephathekayo
Uonomathotholo oluxakeka kukuncedisa ukuba uhlale ungahambisani nesimo sezulu kunye nezinye izinto eziphuculweyo, ukuze uhlele.
I-Tarp kunye nentambo - Ukulungiselela indawo yokukhusela ilanga, imvula, iqhwa, okanye umoya. Isebenza kwakhona njengetafile ye-impromptu okanye i-picnic cloth.
Isiskiti somthunzi okanye i- handkerchief ukukunceda ukhuphe umsi kunye ne-smog
Khusela ulusu lwakho elangeni, emoyeni, nasezikhungwini ngelanga lelanga , i-Lip Balm, ne- Bug Repellant
Ukuhamba izicathulo okanye izibhuthi zokuhamba - Awufuni ukuhamba ngeekhilomitha kwi-flip-flops, izicathulo, okanye izithende.
Imephu yendlela eprintiweyo xa ibhetri yakho imoto okanye ibhetri yefowuni ifa
Ifayile yokuHlaba kwamanzi xa uphuma emanzini amabhodlela.
Isikhongo Siyakunceda Ukuba Udiliza Ebusuku. https://www.gettyimages.com/license/175189047
Okukhethwa kwintlawulo yendalo yonke njengemali kunye neekota zisebenza ngcono kwiindawo ezingabikho kwamakhadi-ngetyala.
Ukusekela ibhetri ukugcina ifowuni yakho ityala.
Iimpawu zokukhanya ze-LED okanye i- headlamps - Ekhanyayo kunye ne-compact, yokuxwayisa abanye kunye nokulungiswa kwebusuku.
Gcina iinombolo zeefowuni eziphuthumayo , ukuncediswa kwendlela, kunye neenkonzo eziphuthumayo kwikhadi eliqingqiweyo, musa ukuzithemba kwisitoreji sakho sefowuni xa ifowuni yakho ifa.
I-Pepper spray yoyikisa izithuthuthu kunye neebhere.
ISityity and Entertainment
Gcina Ingqondo Yakho Ikhuselekile Nangona Ulindele. https://www.gettyimages.com/license/85406669
Iidayisi, amakhadi, iincwadi, iphepha, ipensela okanye ipeni kunye ne- g - Kungakhathaliseki ukuba awukho umgca, uhambo luba nzima kubagibeli. Qinisekisa ukuba unakho izixhobo zokuhlala uhlala kuzo zonke iimeko ngeemidlalo (magnetic zisebenza ngokukodwa), iincwadi kunye neepuzzle.
Iimviwo ezongezelelweyo Ziya kumgama. https://www.gettyimages.com/detail/photo/young-man-using-an-asthma-inhaler-royalty-free-image/911811582
Ukuba unempilo engapheliyo, qiniseka ukupakisha amayeza amaninzi ukuze ungapheli.
Ukushisa okukhulu okanye kubanda kunokufuna ukuba upake iimpahla ezikhethekileyo, iingubo, okanye ezinye izinto ukuze uhlale uzipholile, u-hydrated, ufudumele okanye umile.
Iintsana kunye nabantwana basemncinci baneemfuno ezizodwa, njengezifuywayo. Pake izinto ezifana neentambo, ukutya kwasebantwaneni, ifomula, ukutya kwezilwanyana kunye nesitya samanzi.
Uninzi lwolu luhlu lokukhangela lubandakanya kuphela iziseko; kufuneka ukuba, ngokuqinisekileyo, uhlaziye ikiti yakho ukuze ulungele iimfuno zakho. Ngeendleko zexesha elincinane lokucwangcisa kunye ne-backpack okanye ibhola yeplastiki yokugcinwa, unokwakha i-kit yongxamiseko yemoto eya kukukhupha kuyo nayiphi na indawo eqinile.
Indlela yokulinda ngokukhuselekileyo imoto yakho
Kutheni Kutheni Inqwelo Yam Iphunga Ebi?
Ukusebenzisa iString and Bubbles ukufaka iWindowsshield
Indlela Yokuhlamba Imoto Njengeenzuzo
Ibhenki Ukuvavanya Iingqumbo Zakho
Indlela yokususa i-Jeep Wrangler Hard Top
Dash Izibane: Ukukhanya Kwebhayisiki kwiDashboard yakho
Ukuqwalasela ukutshintsha kombala
Indlela yokubuyisela i-Your Car Car yaseKhongeni yangaphakathi
Indlela yokuyikhupha i-Voltage Pulley
Ingaba Iloliwe Yakho Ifuna Ukuphucula Ukuphucula Ukuphucula?
Ukuchonga i-Code Eror Error Code
Abakwa-Corvettes Abanikazi: I-LS7 Iingxaki zeenjini kunye ne-'Viggle Test '
Ifowuni yokuFelwa kweeFoni: 999-999-9999
'ihr' okanye 'ihr'? Ukwahlukana phakathi kweSiqendu kunye ne-Pronoun
I-Quid Famous Man Man Movie Quotes ukuze Ufumane Unstuck
Uludwe lweSigaba seShintsho phakathi kweMelika yeMicimbi
I-Biology yasekhaya Umsebenzi
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: 1920 - 1929
IKrisimesi kwiNdlu ye-White House ngeXesha le-19
I-8 e-Free Online Free Guides in Xhosa
Ukusebenzisa 'Decir' ngesiSpanish
Iimpawu zeMzimba - ISL isigama
Ukuqonda ukulahlekelwa kwimizi, ukuhlukana, kunye nokutshabalalisa
Abasi-10 abaPhezulu abaPhezulu kwiMMA namhlanje
Amazwi eLizwi (isiNgesi)
Impulse - I-Force Over Time
Phindela i-Penhold Penhold (RPB) Phatha kwiTable Tennis
Indlela yokufunda ukutshulwa, ukuguqulwa, kunye nokupasa ngeZandla zombini
Isiseko seenkcukacha ze-intanethi ezixhomekeke kwi-Estados Unidos
Yintoni ehamba phambili kwiHockey?
Ukuqonda i-Era ehamba phambili